منتدى إنما المؤمنون إخوة (2019 - 2010) The Believers Are Brothers :: (English) :: The Holy Quran is translated :: Somalia شاطر
موضوع: Ad-Dukhaan السبت 03 فبراير 2018, 6:48 am
Magaca Eebe yaan kubillaabaynaa ee Naxariis guud iyo mid gaaraba Naxariista.
(1) Waannu sheegnay iyadoo kale. (2) Waxaan ku dhaartay Kitaabka Cade (Quraanka). (3) Anagaa dejinay Quraanka Habeen barakeysan (Layletulqadar) anagaana wax u digi. (4) Habeenkaasaana la kala bixiyaa amar kastoo xigmo leh. (5) Waana amar agtanada ka ahaaday, anagaana wax dirra (Rasuulo). (6) Naxariis ka ahaater xagga Eebahaa, Eebaana wax maqle ah wax og. (7) Waana Eebaha samooyiinka iyo Dhulka iyo waxa u dhaxeeya haddaad yaqiinsanaysaan. (8) Ilaahay mooyee Eebe kalane ma jiro, isagaa wax nooleeya waxna dila, waana Eebihiina iyo Eebaha Aabbayaalkiinii horreeyey. (9) Waxayse ku suganyihiin shaki wayna ciyaari. (10) Ee sug Maalinta uu ku imaan Cirku qiiq muuqda (isagoo ku dheehan). (11) Oo dabooli Dadka kaasina waa cadaab daran. (12) Waxayna dheheen Eebow naga fayd cadaabka waxaan nahay Mu'miniine. (13) Goormay waantoobi isagoos u yimid Rasuul cad «muuqda». (14) Markaasay ka, jeedsadeen Nabiga waxayna dheheen waa waxlabare waalan. (15) Anagu waxaan idiinka faydaynaa cadaabka wax yar idinkuna waxaad ku noqonaysaan xumaanta. (16) Maalintaan qabanayno qabashada wayn (Qiyaamada) (ama Badar) waanu aarsan. (17) Dhab ahaanbaan Imtixaanay hortood qoomkii Fircoon, waxaana u yimid Rasuul sharaf leh. (18) Isagoo dhihi iidhiiba addoomada Eebe (ama maqalka) waxaan idiin ahay Rasuul aamin ah. (19) Hana iska wayneynina Eebe waxaan idiin la imid xujo cade. (20) Waxaana ka magangalay Eebahay iyo Eebihiin inaad idhagaxyeysaan. (21) Ee hadaydaan i rumeyn iga fogaada (idaaya). (22) wuxuuna u qaylyey Eebihiis in kuwaasu yihiin Qoom dambiila yaal ah. (23) guuri addoomadayda Habeenimo, waa laydin raaciye. (24) kana tag badda iyadoo xasilloon oo furan iyagu waa col la maanshayne. (25) imisey ka tageen Beero iyo Ilo. (26) iyo Tallaal iyo meel sharaf leh. (27) iyo Nicmooyin ay ku raaxaysanayeen. (28) xaalkuna waa saas, waxaana dhaxalsiinay qoom kale. (29) uma ooyin samada iyo Dhulku korkooda, lamana sugin. (30) waana ka korinay ree Bani Israa'iil cadaab wax duleeya. (31) (Fircoombaan ka korinay) wuxuuna ahaa isla weyne xadgudbayaasha ka mid ah. (32) waxaana ka dooranay (dadkii waqtigoodii) anagoo og. (33) waxaana siinay aayado imtixaan cad kusuganyahay. (34) kuwaasi (Gaaladu) waxay dhihi. (35) arrintu ma aha geerida hore mooyee, mana nihin kuwo la soobixin. (36) noo keena aabayowgano haddaad run sheegaysaan. (37) miyagaa khayr roon mise qoomkii Tubax iyo kuwii ka horreeyey waan halaagnay waxayna ahaayeen dambiilayaal. (38) Samooyinka iyo Dhulka iyo waxa u dhaxeeya umaanaan abuurin ciyaar. (39) mana aanaan u abuurin wax aan xaq ahayn hasa yeeshee badankood ma oga. (40) maalinta kala bixinta yaa ballan u ah dhamaan. (41) waana Maalintaan Qaraabanimo waxba laysugu tarayn laysuna gargaarayn. (42) cid Eebe u naxariisto mooyee, illeen waz adkaade naxariistee. (43) Geedka Zaquumka ah. (44) waa cunnada dambi badanaha. (45) waana Laami oo kale kuna kari Caloosha. (46) sida Xamiimka (Kulayl daran) oo kale. (47) (waxaana lagu dhihi) qabta Gaalka una Jiida Jaximo dhexdeeda. (48) markaas ku shuba Madaxiisa korkiisa cadaab kulul. (49) (waxaana lagu dhihi) dhadhami (Cadaabka) waxaad tahay adkaade sharaflehe. (50) kaasina waa kaad ahaydeen kuwo shakiya (Cadaabka). (51) kuwa dhawrsadana waxay kusugnaan meel aamin ah. (52) Jannooyin iyo Ilo (yey kusugnaan). (53) waxayna xidhan Xariir jilicsan iyo mid adag (oo dhalaali) wayna is qaabili. (54) saasoo kale waxaa usugnaaday Haween Indho waaweyn. (55) waxayna uyeedhan Janada dhexdeeda Khudaar kasa iyagoo aamin ah. (56) mana ku dhadhamiyaan Jannada dhexdeeda Geeri, Geeridii hore mooyee wuxuuna ka dhawray (Eebe) Cadaabka Jaxiimo. (57) waana fadliga Eebahaa, taasina waa liibaanta wayn. (58) waxaan ugu fududaynay Quraanka Carrabkaaga inay waantoobaan. (59) ee sug iyaguna way sugiye.
منتدى إنما المؤمنون إخوة (2019 - 2010) The Believers Are Brothers :: (English) :: The Holy Quran is translated :: Somalia